भारतको आगरामा एक युवकले फेसबुकमा लाइभ बसेर आत्महत्या गरेका छन्। उनले आफ्नो कोठामा झुण्डीएर आत्महत्या गरेका हुन् ।अहिले उक्त घटनाको भारतीय प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। आफ्नो प्राण त्याग्नु अगि उनले फेसबुकमा आफु आत्महत्या गर्नलागेको जानकारी गराएका थिए। फेसबुकमा लाइभ गरेको कारण धेरैलाई उनको बारेमा थाहा हुन पुगेको थियो। तर उनले आत्महत्या गर्ने ठाउमा कोही पुग्नु भन्दा अगाडीनै उनले आफ्नो आत्मा त्यागि सकेका थिए।
उनले आत्महत्या अगाडी सुसाइड नोट समेत तयार परेर छोडेको फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। आत्महत्या गर्ने व्यक्ति मुन्ना कुमार रहेका छन्। उनि मुन्ना बीएससी तृतीय वर्षको अध्ययन गरिरहेका थिए। अध्ययन सँगै उनि मेहनत मजदूरी पनि गर्ने गर्थे। मुन्नाले बुधबार बिहान ४ बजे फेसबुकमा उनले लाइभ गरेका थिए।
फेसबुक लाइभमा आफ्नो आत्महत्या पछाडी कसैको पनि हात नरहेको उनले लाइभमा जानकारी गराएका थिए। यस आत्महत्या कसैको दवावमा नभई आफनै निर्णयमा गरेको बताएका थिए। साथै उनले आफ्नो परिवारलाई पनि दुख नदिन प्रहरीलाई लाइभ माफत अनुरोध गरेका छन्। लाइभ गर्ने समयमा उनले सर्ट लगाएका थिएनन् तर आत्महत्या गर्नु भन्दा अगाडी सर्ट लगाएका थिए। प्रहरीले उनको कोठामा क्रान्तिकारी शहिदहरुको तस्विर फेला परेको थियो। प्रहरीका अनुसार उनि धेरै ठुला देश प्रेमी रहेको अनुमान लगाइएको छ। आफु सेनामा भर्ति हुन नसकेको कारण आत्महत्या गरेको बुझिएको छ ।
प्रहरीले उनको कोठाबाट उनको झुन्डिएको शरीरसँगै सुसाइड नोट बरमाद भएको छ। फेसबुकमा लाइभ गरेको भिडियो अहिले सामाजिक संजालमा भाइरलनै बनेको छ। सामाजिक संजालमा यस प्रकारको घटनामा सबैको प्रतिक्रिया एउटै हुने गर्छ। आत्महत्या समस्याको समाधान नरहेको सबैको भनाइ रहेको छ।
प्रकाशित : शनिबार, असार ३०, २०७५१३:३९
गोली हानाहानमा कम्तीमा छ जना विद्रोही लडाकूको मृत्यु
दक्षिण कोरियालीको कार्य समय घट्यो !
भोलि लक्ष्मीको पूजा गर्दा झुक्केर पनि नगर्नुस् यी ६ गल्ति ! जीवनभर आर्थिक संकटले घेर्नेछ
मलाला बेलायत फिर्ता
आकर्षक बच्चाको लागि यतिसम्म गिरेर महिलाले उठाईन् यस्तो कदम, पति तीनछक्क परे
युवतीले टाटु हटाउँदा भयो यस्तो हालत(फोटो सहित)